Loliwe zezona ndlela ifanelekileyo bahambe Italy kungakhathaliseki lonyaka. kunjalo, bazibonakalisa ukuba ikhuseleke kwaye ukhululeke ngakumbi ukhetho, ingakumbi ebusika. Winter train umdla e Italy akukhuselekanga kuphela, kodwa ke kwakhona ngokukhawuleza nangokufanelekileyo. This article was…
Yeyiphi indawo engcono ukonwabela pizza ngaphezu ilizwe yasungulwa ngayo, kunene? uthando Italy, uthando, ukumthanda lo okumnandi lokutya-jika-isidlo! Akukho pizza umqondiso Italy busuke luhlobo ehlambulukileyo zobugcisa, yaye ekugqibeleni UNESCO-evunyiweyo! Zizula Italy, uya kufumana pizza wavula ngo…
Ukuba umhambi solo kwaye ungathanda ukuba ukuqeqesha ezinika njenge Nomad, ngoko endaweni eyiyo. Ukuqeqesha yenye yeendlela eziphambili ukuhamba eYurophu ukuba ufuna ukuba yonke into iYurophu ukuba anikele. Yiba…
Wonke iwayini lover lokwenyaniso uyazi ukuba izixeko iwayini eYurophu unikele ngewayini olufikelelekayo amazing. Ukusuka France ku Italy, kanye olunye, la mazwe babonakala abaninzi ukubane aphambili ehlabathini. ingxenye, oku kungenxa elikhulayo sezulu ifanelekileyo…
Akukho imvakalelo engcono kunokuba ndilale kuloliwe ngobunono ezihambayo nokuvuka ngentsasa elandelayo kwi oya kuyo, imizuzu nje evela kumathambeka. eYurophu, singabantu bakhetha ukukhetha xa ufuna ezona ndawo zokugqibela zeSkiS ukuze utyelele ngololiwe. It’s not…
Yenza kangangoko ngexesha abandayo ngokundwendwela i Festivals Best Winter eYurophu. Le mikhosi zibandakanya yonke into ukususela Ukuskiya kwaye kili umculo, comedy, ice ukubaza, kunye kwimiju- zomkhosi zinenani. Ngezantsi top yethu 5 Roundup oko ndiza oyifumanise kwenzeka kulo lonke elaseYurophu…